HDMI adapter - Earldom
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ HDMI adapter.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် Earldom.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် Earldom.
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း Earldom သည်စွမ်းဆောင်ရည်ကုသမှုကိုဖြတ်သန်းသွားပြီဖြစ်သည်။ အနံ့ဆိုးသောကိုယ်စားလှယ်များ, ဘက်တီးရီးယားခံရွယ်ရှင်လှန်ရေးအရည်ပျော်ပစ္စည်းနှင့်တည်ငြိမ်သောအေးဂျင့်များကိုဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ချမှတ်ခဲ့သည်။.
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်ရည်ရွယ်သည် HDMI adapter.ကျွန်ုပ်တို့၏ရေရှည်ဖောက်သည်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခွင့်များကိုပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါလိမ့်မည်။
5-26 HDMI WiFi Dongle W3 ။
Earldom ပရော်ဖက်ရှင်နယ် DJ သံကိုစပီကာပြင်ပပုံဖမ်းတွန်းလှည်းဘက်ထရီစပီကာ 12 "50W စွမ်းအင်သုံးစပီကာ
Pre-ရောင်းချအပြီးအစီးများနှင့်အပြီး-အရောင်းဝန်ဆောင်မှု Earldom - Earldom အကောင်းဆုံး Earldom ပရော်ဖက်ရှင်နယ် DJ သံကိုစပီကာပြင်ပပုံဖမ်းတွန်းလှည်းဘက်ထရီစပီကာ 12 "50W စွမ်းအင်သုံးစပီကာစက်ရုံစျေး။USB မှ / SD ကဒ် slot က, FM ရေဒီယို& ဘလူးတုသ် function ကို (TWS)
အမြန်အားသွင်းခြင်း - PD 24W (Max) နှင့် QC 18W (Max) မြင့်မားသော output ကိုထောက်ပံ့သော USB C Car charger ကိုပံ့ပိုးကူညီခြင်း။ ပိုမိုမြန်ဆန်မြန်နှုန်းအားသွင်းပေါ်တွင် PD ဆိပ်ကမ်း 3x, iPhone, 12/12 Mini ကို / 12 Pro ကို / 12 Pro ကိုမက်စ် / 11, တာဝန်ခံမှတ်ချက် 10/10 + အစာရှောငျနိုငျပါသညျ / Pro ကို / မက်စ်, iPhone, X / XS / XR / 8/8 Plus အား / SE, Pixel3/ 3A / XL, စသည်တို့ .; လျင်မြန်စွာအားသွင်း 3.0 port ကို 0% မှ 80% အထိရှိသောပစ္စည်းများကို 0% မှ 80% အထိစွဲချက်တင်ထားပြီး S8 / 9/20/21 / Plus, Note 8/30 / 20/20/20/21 / Plus စသည်တို့နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်charger နှစ်ခု devices များတစ်ပြိုင်နက်တည်း - USB A (QC3.0) ဆိပ်ကမ်းနှင့် USB C (PD3.0) ဆိပ်ကမ်းနှင့် USB C (PD3.0) ဆိပ်ကမ်းနှင့် USB C (PD3.0) ဆိပ်ကမ်းနှင့် USB C (PD3.0) ဆိပ်ကမ်းတပ်ဆင်ထားသည်။အလွိုင်းခန္ဓာကိုယ်လက်ရာမြောက်သော texture နှင့်တာရှည်ခံတစ်သက်တာ features များနှင့် Over-လက်ရှိ, Over-ဗို့အား, အပူကျော်ကနေသင့်ရဲ့ device များကာကွယ်ပေးသည်။Tyiny Typum-Sized C Car charger ၏အရွယ်ရှိခန္ဓာကိုယ်သည်အပြည့်အ0ကိုက်ညီပြီးစီးကရက်မီးခိုးရောင်အများစုနှင့်အတူ smitly sit,